I-ETH 2.0 yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: I-ETH 2.0
Iirekhodi ze-Ethereum ezixabisa i-21.7 yeebhiliyoni zeedola ezixabisekileyo ngaphambi kwe-ETH 2.0
Ukuhlaziywa: 15 Agasti 2021
Ikhontrakthi yedipozithi ye-Ethereum 2.0 iyaqhubeka nokurekhoda ukunyuka okuzinzileyo njengoko inani elipheleleyo le-Ether lifakwe kwindawo ephezulu. I-launchpad okwangoku ine-6.9 yezigidi ze-Ether, enexabiso eliqokelelweyo le-21.7 yezigidigidi (ngamaxabiso akhoyo).
Ukunyuka kwe-ETH ebambekayo kubangelwa ikakhulu kukunyuka kwamva nje kwixabiso le-Ethereum kunye nokuziva ngokubanzi okubonakalayo. Inethiwekhi kuthiwa yongeze malunga ne-9,000 yokuqinisekisa ngokusemthethweni kwezi veki zintathu zidlulileyo. Ngexesha lokushicilela, inani elipheleleyo lokuqinisekisa kwiqonga lihleli kuma-208,995.
Njengoko inani le-ETH lifakwa kwi-Ethereum 2.0 ikhontrakthi yedipozithi iyaqhubeka nokwanda, inani elipheleleyo le-ETH elitshisiweyo ukusukela oko iLondon Hard Fork ngoku ifikelela kuma-46,018 (exabisa malunga ne- $ 145 yezigidi).
Ethereum New ETF zitshintshi e zeedola imbali yamanani, ishati ukususela ekuqaleni kokuthengisa
Ngeli xesha, ngelixa i-cryptocurrency yesibini ngobukhulu iqhubeka nokukhula kusetyenziso oluqhelekileyo kunye nokwamkelwa kwamaziko, Abacebisi boTyalo-mali baseKryptoin baseDelaware kuthiwa bafaka ingxelo yokuphuhlisa kunye nokunikezela ngengxowa-mali yokurhweba ngokutshintshiselana ye-Ethereum (i-ETF) ne-US Securities and Exchange Commission ngoLwesine odlulileyo.
Esi sicelo siba yi-ETH ye-EF yesithathu ezaliswe ngo-2021. Nangona kunjalo, i-SEC ibonakala ingayithandi imbono ye-ETFs, nanjengoko ingekamkelwa nayiphi na.
Kwezinye iindaba, umthamo wentengiselwano ka-Ether ugqithile kuleyo yeBitcoin okokuqala ezimbalini. UCoinbase utyhile olu phuhliso lutsha kwileta eyayisiya kubanini zabelo malunga nokusebenza kweQ2 2021.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ixabiso le- Ethereum ihamba kakuhle kwaye igcine umbono okhulayo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngoku. I-cryptocurrency isandula ukuphakama kwiinyanga ezintathu eziphakamileyo ze- $ 3,333 izolo ngaphambi kokuthumela ulungiso oluncinci namhlanje.
tags Cryptocurrency, I-ETH 2.0, Ethereum, iindaba
I-Sygnum Bank Amatyala kwi-ETH 2.0 yeQonga eliQalayo ngaphambi koPhuculo
Ukuhlaziywa: 7 Julayi 2021
Ngo-Novemba ophelileyo, i-Sygnum Bank AG yaqaphela ukuba yayidibene ne-Taurus Group, inkampani ehambelana ne-SEBA yebhanki kunye nezinye iinkonzo ze-fintech zase-Switzerland, ukubonelela abathengi nge-akhawunti ye-crypto. Ngelo xesha, iiakhawunti ezibanjisiweyo ziya kuba namandla kwinethiwekhi yeTezos, iqonga lobungqina.
Nangona kunjalo, ngokuphuculwa kwe-ETH 2.0 kufutshane nekona, iSygnum ibhengeze ukuba abathengi ngoku banokubambisa kwinethiwekhi ye-Ethereum. I-Sygnum iyazingca njengebhanki yokuqala evunyiweyo ye-FINMA ukuya kwinqanaba le-ETH 2.0.
Intloko yeeyunithi zeshishini kwi-Sygnum Bank, uThomas Eichenberger, uqaphele ukuba:
"U-Ethereum ngowesibini ngobukhulu kwi-blockchain protocol, kwaye i-ethereum staking yeyona nto iphambili kwiipothifoliyo zee-asethi zedijithali ezinokuthi ngoku zifikeleleke kwimeko efanelekileyo, ekhuselekileyo nelawulwayo."
"Oku kwandisa ukunikezelwa kweSygnum yemveliso enomtsalane, elawulwayo evelisa imveliso ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi ukuze baqokelele ezinye iindlela zembuyekezo ukongeza kuxabiso lwentengo."
I-Sygnum Bank ihleli kwiNtengiso ye-40 yezigidi zezigidi
I-Sygnum Bank ye-ETH 2.0 ye-foray iza ngeveki emva kokuba ibhanki i-behemoth uJP Morgan iqaphele ukuba ishishini le-staking licandelo elilindelekileyo. I-JPM iqikelele ukuba ngokusungulwa kwe-ETH 2.0, icandelo le-staking linokuba yintengiso ye-40 yezigidigidi nge-2025.
Intloko yeakhawunti kunye nokugcinwa, u-Thomas Brunner, uqaphele oko "Ukuma kunokhetho olunyanzelekileyo kubatyali-mali bexesha elide e-Ethereum." Isigqeba songeze ukuba abathengi beSygnum banako "Zuza kwimivuzo ephezulu ngoku."
Okwangoku, iingxelo kunye neenkcukacha-manani zibonisa ukuba ikhontrakthi yedipozithi ye-ETH 2.0 ngoku idlulile kwisigidi se-6 se-Ether, isenza i-ETH yenye yezona ndawo zonxibelelwano zixabisekileyo emhlabeni. Ikhontrakthi yedipozithi ivumela abasebenzisi ukuba babambe i-ETH kwicandelo le-ETH 2.0 lesigaba se-0 sebhakoni.
tags Cryptocurrency, I-ETH 2.0, iindaba, Ibhanki yeSygnum
I-Ethereum ikhuselekile ngaphezulu kwe-6 yezigidi ze-Ether kwi-ETH yayo ye-2.0 yesivumelwano ngaphambi koHlaziyo lwe-EIP1559
Ukuhlaziywa: 2 Julayi 2021
Amehlo amaninzi ajonge kwi Ethereum (ETH) uthungelwano njenge-Ethereum 2.0 ikhontrakthi yedipozithi ngoku ineqhayiya ngaphezulu kwe-6 yezigidi ze-Ether. Okwangoku, abantu abathanda i-Ethereum bazilungiselela uphuculo olulindelwe kakhulu lwe-EIP1559 kunye nefoloko enzima yaseLondon.
I-Glassnode, umboneleli wee-analytics on-chain, uqaphele ukuba:
"Ukukhula kwimisebenzi emitsha kunye esele ikho kuyo yonke i-DeFi kuthathe into, njengoko uninzi lwabathathi-nxaxheba lisiya kwindawo yokubeka emngciphekweni phakathi kwe-60% + yeediphu ukusuka kwi-ATH kuninzi lwethokheni yolawulo. Ngelixa izinto ezenziwa kwikhonkco zingasonyuki njengepesenti iyonke ngenyanga, ukukhula konyaka kuye kuhlala kukhulu. ”
Ngaphandle kokunyuka ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 2,000, uphando lubonisa ukuba uthungelwano lwe-ETH luzibonele ngamehlo izithintelo ezibalulekileyo. Umzekelo, iBlock Crypto's uLars Hoffmann uthathe i-Twitter izolo ukuyokucacisa ngomsebenzi we-Ethereum on-chain. UHoffmann uqaphele ukuba:
"Njengoko bekulindelekile, uninzi lweemetriki lwalunezinto ezinzima (kunye nee-metric ze-ETH ezine-beta ephezulu)," UHoffmann wathumela umyalezo nge-titter. “Ngelixa sizinze kumanqanaba aphezulu i-YoY, ipabola yeemetriki ezininzi yaphukile. Umthamo otshintshiweyo kwityathanga lehle nge-46.6% ukuya kwi-572.7 yeebhiliyoni.
UHoffmann wongeze wathi:
Ngokubhekisele kwikamva le- [ethereum], umthamo wehle ngama-49.3% ukuya kwi- $ 862bn. [Ethereum] ivolumu yokhetho lwanyanga zonke yehle nge-68.8% ukuya kwi-5.19 yeebhiliyoni zeedola, kodwa isephezulu kunalo naliphi na ixesha kwi-Q1. ”
Iimpawu zeMarike ye-Ethereum igqitha kwi-Bitcoin kwi-Q1 nakwi-Q2
Ngaphandle kwezithintelo ezibonakalayo, uthungelwano lwe-Ethereum lurekhode uphuhliso oluqinisekileyo ecaleni kwesigidi se-6 se-ETH esivaliweyo kwisivumelwano se-Ethereum 2.0. Umzekelo, iingxelo zibonisa ukuba ukubonelelwa kwe-Ether kutshintshiselwano kuye kwehla kweyona nqanaba lisezantsi ukusukela ngoNovemba 2018. Ingxelo yakutshanje evela eGlassnode ibonisa ukuba amaxabiso egesi eDeFi ehle ngamanqanaba abalulekileyo kumaxesha akutshanje. Umboneleli we-analytics wongeze ukuba:
"Amaxabiso egesi abuyele kwangoko kumanqanaba ehlobo e-DeFi ukusukela ngonyaka we-2020, kangangokuba abathengisi abakulungeleyo ukuhambisa umonde banokuhamba kunye nomrhumo werhasi yeGwei ngexesha lokungasebenzi."
Okwangoku, ukuqonda okutsha okuvulekileyo.ukuveza ukuba inethiwekhi ye-Ethereum yayinayo “Malunga ne-200K yeedilesi ezisebenzayo zemihla ngemihla kune-BTC ngeCawa, nge-27 kaJuni. Olu ibilusuku lwesithathu kuphela ukusukela nge-1 kaJanuwari, 2017 apho i-ETH ibineedilesi ezisebenzayo kune-BTC. ”
Izivumelwano ze-Ethereum 2.0 zeDepos ngoku zibambe i-5.6 yezigidi ze-Ether: i-Etherscan
Ukuhlaziywa kwenethiwekhi ye-Ethereum 2.0 ekudala ilindelwe kuthiwa kungaphezulu kwe-5.6 yezigidi ze-Ether itshixelwe kwisivumelwano sayo sedipozithi, irekhodi eliphezulu. Ngokwedatha yakutshanje evela kwi-Etherscan, ixabiso lilonke le-Ether itshixelwe kwisivumelwano se-Ethereum 2.0 ngoku simi kwi-13.5 yezigidigidi zeedola.
Ingxelo ye-ETH 2.0 yaqala ukubakho kwasekuqaleni kukaDisemba 2020 ngokuphehlelelwa kweBheacon Chain. Kwiintsuku nje ezine emva kokubhengezwa okokuqala, kufutshane ne-1 yezigidi u-Ether wayezimisile. Inethiwekhi ye-Ethereum iqale inkqubo yokufuduka ukusuka kwinkqubo yayo yangoku yobungqina bomsebenzi iyeyona ndlela isebenzayo yokuqinisekisa ubungqina.
Oko kwathethi, ixabiso lilonke le-ETH eligxunyekwe kwi-Ethereum 2.0 lifumene ukwehla okukhulu kwezi veki zimbini zidlulileyo ikakhulu ngenxa yengozi yemarike ye-crypto, nangokongezwa, i-ETH crash.
U-Ethereum wafikelela kwinqanaba eliphezulu lama-4,300 12 eedola ngoMeyi 45 kodwa wehla ngaphezulu kwe-2,450% ukusukela ngoko. Ngexesha lokushicilela, i-ETH ithengisa ngeenxa zonke kwinqanaba le-282 yeedola kwaye ine-cap ye-market ye-17.4 yezigidigidi kunye ne-market ye-XNUMX%.
Unikezelo lwe-Ethereum Runs Thin, olubonisa ukuba uBullishness okwandayo
Iminenga idlala indima ebalulekileyo kuthungelwano lomsebenzi we-Ethereum. Ngokutsho kopapasho lwakutshanje yiSantiment, inkampani ye-crypto analytics, eyona mali ingaphezulu kwe-10 yezigidi zemali engatshintshiswanga.
I-Santiment ithumele ukuba:
"I-10 ye-Ethereum ye-whale engatshintshiswanga yeengxowa-mali iyaqhubeka ukunyuka ngokwe-ETH ebanjwe. Idityanisiwe, imali eziingqekembe ezingama-19.67 ezigcinwe kwezi dilesi zezona ze-ETH zidityanisiweyo zezona dilesi zili-10 zingatshintshiswanga ukusukela ngoJulayi ka-2016. ”
Iingxelo zamva nje zibonise ukuba ukuhanjiswa kwe-Ether kukhokelo lotshintshiselwano nge-imali yedatha kuye kwehla kakhulu. Le metric isebenza njengesalathiso esikhutshiweyo semali engaphantsi kwemali esisiseko.
NgokukaGlassnode, utshintshiselwano lwedijithali ngoku lubambe ngaphantsi kwe-13 yezigidi ze-ETH, iminyaka emibini iphantsi. Into enomdla kukuba, iikhontrakthi ze-ETH Smart ngoku ziqulathe ngaphezulu kwe-23% ye-ETH iyonke.